Sary Mampiseho Tovolahy Mijery Afomangan’ny Taombaovao. Nahoana No Milaza Ireo Breziliana Sasany Fa Malahelo sy Mahantra Izy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, 繁體中文, Español, Português, Français, English
Sary niteraka adihevitra mafana tao Brezila. Pikantsary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Lucas Landau.
Faran'ny taona ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pizahantany malaza indrindra manerantany. Raha olona 2,4 tapitrisa no mivory ao amin'ny torapasika Copacabana ao Rio de Janeiro mba hijery afomanga, nitodika tany amin'ny tovolahy mainty hoditra iray ny fakàntsarin'ilay mpaka sary mahaleotena Lucas Landau. Mando sy tsy manao akanjo ambony izy, mijanona ao anaty ranomasina miaraka amin'ny rano hatreo an-dohaliny. Mifamihina eo akaikin'ny kibony ny tanany, toa tahaka ny mangovitra izy, saingy nijanona teo izy, nitebiteby tamin'ny zavatra hitany teny an-danitra. Tao aoriany, izay tsy nifantohan'ny fakantsary, vahoaka maro no nitafy akanjo fotsy, naka selfies sy nankalaza.
Namoaka ny sary tao amin'ny Facebook, Instagram, Twitter i Landau, niparitaka tao amin'ny WhatsApp avy eo ny sary miaraka amin'ny tantara diso momba ilay zazalahy tsy manan-kialofana sy nilaozana, ary nanomboka namaky izany ny olona. Nahita fahantrana sy alahelo ny sasany, zazalahy mainty hoditra naneho ny tsy fitoviana eo amin'ny fiarahamonina Breziliana.
Saingy nihemotra avy eo ireo tombatombana ireo.
Nanohitra ny fomba fijery i Stephanie Ribeiro, mpikatroka mpitondra ny feon'ny mainty hoditra any Brezila izay manana mpanjohy 46.000 ao amin'ny Facebook:
Ho ahy, tsy misy fahasamihafana eo amin'ireo mahita tovolahy mainty hoditra ary milaza azy haingana fa “zaza maditra”, sy ireo polisy manamboninahitra izay mahita mainty hoditra ary manenjika sy midaroka azy ireo. Milaza izany tantara izany foana ny lehilahy mainty hoditra, voamariky ny maso mpanavakavaka mitady fitsarana an-tendrony izay hamafisin'ny haino aman-jery isan'andro ny fiainan'izy ireo fa tsy ny fahamarinana marobe momba azy ireo. Manamafy izany isika rehefa mandrisika ny endrika fisiantsika isan-karazany ho hita amin'ny alalan'ny fomba fijery manavakava-bolonkoditra, eny fa na dia talohan’ ilay ankizy aza [sic] … ao anatin'ny vinavinantsika ny LOZAN'NY TANTARA IRAY .
Nohadihadian'ny dikanteny Breziliana ao amin'ny gazety El País ao Espaina, hoy ilay mpanoratra mainty hoditra, Anderson França hoe:
Tsy ny sary no olana, fa ny fandraisana azy, ny tontolony. Ny olona mijery ny sary dia efa vonona hilaza fa mifandray amin'ny fahantrana sy olona nilaozana ny sarin'ny olona mainty hoditra, kanefa raha ny tena izy, ankizy mainty hoditra fotsiny eo amoron-dranomasina izy. Fanavakavahana ara-drafitra ity fitsarana an-tendrony ity, izay ny faharatsian'ny fampianarana ny vahoaka Breziliana tenany no niaviany.
Na izany aza, mbola tsy fantatra ny tantara marina – na ilay mpaka sary aza tsy mahalala hoe iza ilay zazalahy. Taorian'ny niparitahan'ny sary, nanampy fanazavana momba ilay sary i Landau:
Niasa aho, naka sary ny olona nijery afomanga tao Copacabana. Teo izy, talanjona tahaka ny olon-kafa. Nanontany ny taonany (9) sy ny anarany aho, saingy tsy reko izany noho ny tabataba. Satria tao anaty rano izy (izay nangatsiaka), niavaka tamin'ny olon-kafa izy. Tsy fantatro raha izy irery na niaraka tamin'ny fianakaviany. Manokatra sehatra ho an'ny fandikàna marobe ity sary ity; ara-drariny avokoa ireny rehetra (fanehoan-kevitra) ireny, avy amin'ny toerana misy ahy. Misy fahamarinana, saingy tsy fantatro hoe iza amin'ireo. Ampahafantaro ahy raha fantatrao hoe iza ilay zazalahy, azafady.
Tantara hafa momba ny fotsy hoditra mpamonjy?
Nanomboka niparitaka ny pikatsarin'ny olona iray tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratr'i Landau, izay miezaka mividy dika mitovin'ilay sary – izay novaliany tamin'ny antsipirihan'ny fifandraisana aminy. Ho setrin'izany, nanomboka nanadihady ny asan'i Landau ny olona.
Naka sarina vondrom-piarahamonina mainty hoiditra tao Afrika Atsimo sy ireo hetsika mahery setra tany amin'ny faritra mahantra (favelas) ao Rio de Janeiro, izay ahitana olona mainty hoditra maro an'isa i Landau, izay fotsy hoditra.
Vokatr'izany fahavitrihana izany, nisy fomba fiteny iray tao anatin'ny adihevitra: “olana fotsy hoditra mpamonjy”. Araka ny filazan'ny Wikipedia, “manondro olona fotsy hoditra izay manampy olona tsy fotsy hoditra izany, miaraka amin'ny fanampiana amin'ny toe-javatra sasany izay heverina fa fitiavan-tena”.
Mikasika ilay mpaka sary sy ny valinteny ankapoben'ny vahoaka amin'ny sary, bilaogera Marcelo Rocha, mainty hoditra koa, nampahatsiahy mpilalao sarimihetsika amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Amerikana “Everybody Hates Chris (Mankahala an'i Chris ny rehetra)”, izay malaza any Brezila:
Ny toetran-dRamatoa Morello dia mampiseho olona fotsy hoditra iray izay manaiky ny fananana tombontsoa, saingy amin'ny fomba be hambo loatra toy izany, mihevitra ny tenany tokoa ho ambony izy sy hoe miankina amin'ny fanampiany ny mainty hoditra rehetra. Ao amin'ny tantara mitohy maromaro, hitantsika [izy] miaraka amin'ny “fikasana mahafinaritra” satria miezaka manampy ny mpilalao fototra miatrika ny tantara mampalahelo izay misy ao an-tsainy ihany izy. Mbola mahazo tombombarotra ao an-tsena ilay mpaka sary mpanao asa soa manana fanahy mainty hoditra. […] Misy izany satria misy fotsiny izao ny olona te ho Ramatoa Morello.
Ny fandinihana ny firenena mihitsy
Mandritra izany, nilaza ny sasany fa tsy afaka manampy ankoatra ny mahita ny sary amin'ny alalan'ny fakàntsarin'ny tsy fitoviana sy alahelo noho ny zava-misy lehibe kokoa ao Brezila ny olona..
Copacabana, faritra manan-karena ao Rio de Janeiro, dia voahodidin'ny vondrom-piarahamonina kely fidiram-bola sy ny favelas, izay mena manja na mainty hoditra ny ankamaroan'ny mponina. Ao amin'ny lahatsoratr'i Landau, mpaneho hevitra iray nahatsiaro fa mijanona tsy mandeha amin'ny alina intsony ireo fiara fitateram-bahoaka avy any ambanivohitra, izay voalaza fa mba hanakanana ny tanora mainty hoditra tsy hankany amin'ny afomanga.
Any Brezila, firenena farany ao Amerika izay nanafoana tamin'ny fomba ofisialy ny fanandevozana (tamin'ny taona 1889), ampahany kely fotsiny (17 isan-jato) amin'ny 1 isan-jaton'ny manankarena ao amin'ny firenena no mainty hoditra, na dia mandrafitra ny 54 isanjaton'ny mponina manontolo aza ny mainty hoditra. Amin'ny taha amin'izao fotoana izao, ny elanelan-karama misy eo amin'ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra dia tsy hitovy raha tsy amin'ny taona 2089.
Misy ihany koa ny olana momba ny fisoloantena. Nampiseho ny fikarohana nataon'ny Oniversiten'i Brasilia fa amin'ireo boky rehetra navoaka tany Brezila teo anelanelan'ny taona 1965 sy 2014, 10 isan-jato monja no nosoratan'ireo mpanoratra mainty hoditra. Nasehony koa fa fotsy hoditra ny 80 isan-jaton'ny mpilalao fototra amin'ny boky tantara foronina. Amin'ny horonantsary, 4 isanjato monja no famokarana mampiasa mpanoratra rafi-tantara mainty hoditra ary 31 isan-jato no manao tsinontsinona mpilalao mainty hoditra – izay matetika milalao toetra mifandray amin'ny fahantrana sy ny heloka bevava.
Tsy azo lavina fa firenena manana olana ara-panavakavaham-bolon-koditra i Brezila, na dia mbola tsy nanana lalàna momba ny fanilikilihana aza izy. Araka ny nolazain'ilay mpaka sary Breziliana Fernando Costa Netto, tamin'ny tsongan'i El Pais:
Na dia mampitodika amin'ny zoro hafa aza ny sary raha vao nahita ilay zazalahy isika, mibaribary tsara ao amin'ny sary Copacabana i Brezila (…) Miresaka momba ny anjara andraikitra sy ny herin'ny sary isika eto, miady hevitra momba ny fanavakavahana, ny faran'ny taona ao Rio, ny estetika, ny fihetseham-po, ny antontan-kevitra, ny fametraham-panontaniana amin'ny tenantsika … Manatanteraka ny anjara asany ny sary.